Okirikiri zoro ezo nke Kildare na ụzọ inyocha - IntoKildare
Okwesiri, Clane, Kildare, Newbridge, Ezinụlọ, di na nwunye, Ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme n'anya, Ndị Na-achọ Adventure, Ihe Zoro Ezo, N'èzí, ndị na-anụ ọkụ n'obi
Site na '' oge ọkọchị ọzọ '' na -adịghị anya, ọ nweghị ihe dị ka ime ọtụtụ ije. Ọ bụrụ na ụzọ mkpagharị gị mgbe niile na -efu mmetụ nke njem ma ị na -achọ ihe ọhụrụ, elela anya ọzọ ka anyị na -achọ ịkekọrịta ụfọdụ ihe nzuzo Kildare kacha mma n'okpuru.
Despite its status as a hidden gem, the Rowzọ Barrow has a reputation as one of the most scenic walking trails in the country. Beginning in Lowtown, County Kildare, the full trail stretches on for XNUMXkm, also covering parts of Kilkenny, Laois and Carlow on route.
We couldn’t mention beautiful scenic trails in Kildare without gushing about Pollardstown Fen Nature Reserve. Located XNUMXkm from Newbridge, it is a designated area of conservation based on XNUMX hectares of alkaline peatland. A rarity in both Ireland and Western Europe, it features unique and diverse flora and fauna, which visitors can learn about during the experience.
Ọnọdụ dị jụụ nke Ugwu Allen leghaara anya n'ebe dị anya, enwere ọtụtụ ụzọ enwere ike ịnụ ụtọ ya na fen niile, yana njem na -atọ ụtọ na -atọ ụtọ nke dị n'akụkụ okporo ụzọ ahụ e buliri elu.
Ọ bụ ezie na anabatara nkịta, a ga-edobe ha n'isi oge niile, a ga-eburukwa akpa mkpofu nkịta n'ihi na enweghị ike ịtọpụ ha na saịtị. A ga -enyochakwa ụmụaka n'oge nleta ahụ, ọkachasị mgbe ha nọ n'ụgbọ ụkwụ.
Maka ime otu ụbọchị ya: The Curragh Plains
Na -agbatị gafee acres 5,000 site na Kildare Town ruo Newbridge, Oke Osimiri Curragh bụ mpaghara ala ahịhịa dị larịị na -akọwaghị nke ukwuu na Ireland, yana nke gbabiri n'akụkọ ihe mere eme.
Ebe ọ bụ larịị ghere oghe, ị nwere ike ịga ebe ọ bụla. Ndị na -amalite mmalite ga -enwe ọ ofụ ịhụ ụfọdụ n'ime ịnyịnya oke ala Ireland nke na -agbagharị n'elu mkpọsa, ebe ndị na -aga mgbede ga -amata ọdịda anyanwụ kacha dị na Kildare.
The Curragh bụ ihe dị oke ọnụ ahịa dị mkpa maka ọdịbendị ya na ọdịbendị ya, ebe ndị ọbịa mebiri maka nhọrọ ma a bịa na odida obodo na ọtụtụ ihe omume a na -enye. Ihe ama ama Kildare ama ama nwekwara ụlọ Ọgbakọ Curragh, Museum Military, Karibu Pet Farm na klọb golf kacha ochie na Ireland, Royal Curragh Golf Club.
Maka ịla n'iyi n'ime ya niile: Kildare Maze
Maka egwuregwu ezinụlọ a na -agaghị ekwe omume na mgbakwunye mgbakwunye nke echiche dị egwu, Kildare Maze bụ ihe dị mkpa maka njem ezumike ezinụlọ Sọnde ọ bụla n'oge ọkọchị a. N'ihe karịrị 2km nke ụzọ nwere hekta 1.5 nke ogige, a na -ama ndị ọbịa aka ịchọta ụzọ ha ga -aga ụlọ elu nlele dị n'etiti nnukwu oke a.
Enwere ike ịnụ ụtọ echiche panoramic nke ime obodo Kildare site na ụlọ elu na -ekiri, nke na -enyekwa ntakịrị nlele nke njiri mara mma. St Brigid, onye nsọ na -elekọta Kildare, bụ ihe mkpali maka imewe ahụ, nke gụnyere obe St Brigid dị n'akụkụ akụkụ anọ nke maze.
Site na iji osisi osisi, waya zip, golf nzuzu na usoro mwakpo a na -enyekwa, Kildare Maze ga -aga ije oge ọkọchị gị n'ọkwa ọzọ!
Maka ndị hụrụ okike na anụmanụ n'anya: Liffey Walk - Clane na Osimiri Liffey okirikiri
Ezigbo maka ikiri nnụnụ na anụ ọhịa, Okirikiri Clane na Osimiri Liffey bụ ahụmịhe na -atọ ụtọ maka ndị na -achọ ijikọ okike. Ụzọ a na -ejegharị ejegharị na -ekpuchi ihe karịrị 6km ma nwee ọtụtụ agwa na -atọ ụtọ n'ụzọ, gụnyere mink, azụ azụ, otters na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'agbanyeghị ọnọdụ ya n'akụkụ obodo Clane na -ekwo ekwo, ụzọ ụkwụ na -enye ụzọ mgbapụ dị jụụ maka ndị na -achọ udo na ịdị jụụ. Ndị na -achọ ịkpọbata nwa ha maka njem ahụ kwesịrị iburu n'uche na a ga -edobe nkịta mgbe niile.
Maka ntụpọ ụlọ na ezinụlọ: Mullaghreelan Wood
Ebe mara mma maka njem okpomọkụ gị, Osisi Mullaghreelan, nso Kilkea na County Kildare, siri ike iti. Edobere ụzọ akaghị 2.3km n'ebe mara mma gbara gburugburu ugwu ugwu, nke na-eleghara ọmarịcha Kilkea Castle anya. Ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme ga-enwe obi ụtọ n'ọtụtụ akụkọ metụtara ihe ncheta oge ochie a, ebe ndị na-achọ ndozi ọdịdị ha ga-ahụ ya n'ọtụtụ ifuru ọhịa dị n'akụkụ ala ọhịa.
Ọkacha mmasị ezinụlọ, ọ bụ ụzọ ezumike zuru oke - mana ọ nwere ike nweta ntakịrị apịtị mgbe ihu igwe Irish na -adịghị mma, yabụ echefula wellies!
OkwesiriClaneKildareNewbridgeEzinụlọdi na nwunyeNdị hụrụ akụkọ ihe mere eme n'anyaNdị Na-achọ AdventureIhe Zoro EzoN'èzí, ndị na-anụ ọkụ n'obi